Vao avy namono ny fizahan-tany i Israel tamin'ny alàlan'ny Quarantine 2 herinandro ho an'ny rehetra
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Vao avy namono ny fizahan-tany i Israel tamin'ny alàlan'ny Quarantine 2 herinandro ho an'ny rehetra
Israel, ny tany famoronana nanidy ny sisintaniny ho an'ny vahiny, ao anatin'izany ny mpizahatany. Ny teratany Israeliana niverina an-tanindrazana dia tsy maintsy hiditra quarantine roa herinandro.
Tao Israel dia novonoin'ny praiminisitra Benjamin Netanyahu ny fizahan-tany Israel. Izay rehetra miditra ao amin'ny Fanjakana jiosy dia tsy maintsy mandinika ny karazan-kery 14 andro hiadiana amin'ny coronavirus
Noraran'ny manam-pahefana palestiniana mandritra ny roa herinandro ny mpizahatany vahiny, nanidy trano fiangonana sy moske ao Betlehema tamin'ny trangana virus 25 voamarina ary iray ao Tul Karm. Teratany telo ambin'ny folo amerikana no kararantina amina hotely any Betlehema.
Araka ny toromarika avy amin'ny minisitry ny atitany Israel Aryeh Deri, ny lalàna momba ny quarantine ho an'ny Isiraeliana dia hanomboka amin'ny alatsinainy 8 alina. Ny baiko ho an'ireo vahiny tonga eto amin'ny firenena dia milaza fa mila manaporofo izy ireo fa manana trano sahaza azy ireo ampy karamaina mandritra ny fijanonany ao amin'ny firenena. Ny didy ho an'ny vahiny dia manan-kery manomboka amin'ny 8 PM Alakamisy.
Ny praiminisitra Benjamin Netanyahu dia nanolotra kaomandina quarantine ho an'ireo rehetra tonga ao amin'ny firenena. Haharitra roa herinandro ny kaomandy Quarantine ary mety hisy fiatraikany amin'ny Israeliana 300,000 XNUMX eo ho eo. Nantsoin'i Netanyahu ho toy ny fanapahan-kevitra “fanapahan-kevitra hentitra nefa tena ilaina izany.”
Vao maraina be androany Fizahan-tany Israel nandefa fanambarana an-gazety tany eTurboNews milaza fa mandray ny mpitsidika i Israel ary voaro amin'ny COVID-19 izy ireo. eTN tsy namoaka ny famotsorana. Tany am-piandohan'ny herinandro lasa teo dia nanisy lisitra lisitra firenena maromaro i Israel, anisan'izany i Alemana, Italia, Sina, Korea Atsimo, Thailand.